Tuujinta Sawirku Waa Waajib Raadinta, Moobilka, iyo Ku-habboonaynta Beddelka | Martech Zone
Markay naqshadeeyayaasha garaafyada iyo sawir qaadayaashu soo saaraan sawiradoodii ugu dambeeyay, sida caadiga ah looma habeyn si loo yareeyo cabirka faylka. Xakamaynta sawirku waxay si weyn u yareyn kartaa cabirka faylka sawirka - xitaa 90% - iyadoon hoos loo dhigayn tayada isha qaawan. Yaraynta cabirka feylka sawirku wuxuu yeelan karaa xoogaa faa'iidooyin ah:
Waqtiyada Xawaaraha Degdega ah - Ku dhejinta bogga si dhakhso leh ayaa loo yaqaan inay bixiso khibrad sare oo loogu talagalay isticmaaleyaashaada halkaasoo aysan ku jahwareeri doonin oo ay muddo dheer la shaqeyn doonaan boggaaga.
Qiimeynta Raadinta Noolaha - Google wuxuu jecel yahay boggaga dhaqsaha badan, sidaa darteed waqtiga badan ee aad iskaga soo riixi karto waqtiyada xamuulkaaga, ayaa ka sii fiican!
Heerarka Beddelka - goobo deg deg ah ayaa sifiican u badalaya!
Meelaynta Sanduuqa Ka Wanaagsan - haddii aad sawirro waaweyn ka qoreyso boggaaga oo aad u direyso emaylkaaga, waxay kugu riixi kartaa galka qashinka halkii aad ka heli lahayd sanduuqa.
Iyadoo aan loo eegin macmiilka, marwalba waan cadaadiyo oo wanaajiyaa sawiradooda waxaanan arkaa horumar ku yimaada xawaaraha boggooda, darajaynta, waqtiga goobta, iyo heerarka beddelka Runtii waa mid ka mid ah dariiqooyinka ugu fudud ee lagu wadi karo tayaynta waxayna leedahay soo laabasho weyn maalgashiga.
Sida Loo Wanaajiyo Isticmaalka Sawirka
Waxaa jira dhowr siyaabood oo si buuxda sawirrada looga faa'iideysan karo waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Dooro sawirro waaweyn - dad aad u tiro badan ayaa dhayalsada saamaynta sawirrada weyn si ay uga gudbaan farriinta… haddii ay tahay sawir-gacmeed (sida maqaalkan), jaantus, sheeko sheegeysa, iwm.
Riix sawiradaada - way xawli doonaan si dhaqso leh iyagoo ilaalinaya tayadooda (waxaan kugula talinaynaa Kraken oo waxay leedahay qalab weyn oo WordPress ah)
Sare u qaad sawirkaaga magacyada faylka - adeegso ereyo fure ah oo sharraxaad u leh sawirka oo isticmaal xarfaha (ma aha hoosta) hoosta ereyada.
Sare u qaad sawirkaaga koobab - cinwaannada ayaa lagu daboolay daalacashada casriga ah iyo hab fiican oo loo geliyo wicitaan-ficil.
Ku hagaaji qoraalkaaga beddelka qoraalka (qoraalka alt) - qoraalka alt ayaa loo sameeyay helitaanka, laakiin qaab kale oo weyn oo loo geliyo ereyada muhiimka ah ee sawirka.
Link sawiradaada - Waxaan layaabay tirada dadka ee sida aadka ah ugu dadaalaya inay sawirada galiyaan laakiin iska dhaaf xiriirin loo adeegsan karo in lagu kaxeeyo dad dheeri ah bogga degitaanka ama wicitaan kale.
Ku dar qoraalka sawirradaada - dadku badanaa waxay ku jiitaan sawir, iyagoo siinaya fursad ku dar qoraalka ku habboon ama wicitaan-ku-dhaqaaq si loo wado hawlgal wanaagsan.
Ku dar sawirradaada Sitemaps - waanu kugula talinaynaa Darajada Xisaabta SEO hadaad kujirto WordPress.
Ka faa'iidayso jawaab sawirro - sawirro dulinka dulsaaran iyo adeegsiga srcset si loo muujiyo cabirro badan oo muuqaal ah oo la filaayo, ayaa si dhaqso leh u rari doona sawirrada iyadoo lagu saleynayo qalab kasta oo ku saleysan xallinta shaashadda.
Ka rar sawiradaada a shabakada bixinta nuxurka (CDN) - bogagani juquraafi ahaan ayay ku yaalliin waxayna dedejinayaan gaarsiinta sawirradaada bogagga daalacashada ee martidaada.
Hagaha Hagaajinta Sawirka Websaydhka
Xogtan dhammaystiran ee ka socota WebsiteBuilderExpert, Hagaha Hagaajinta Sawirka Websaydhka, wuxuu ku dhex socdaa dhammaan faa iidooyinka sawir-qaadista iyo isku-hagaajinta - sababta ay muhiim u tahay, sifooyinka qaabka muuqaalka, iyo tallaabo-tallaabo ugu habboon hagaajinta sawirka.
Platform Muujinta Sawirka Kraken
Haddii aad rabto boog deg deg ah waqtiyada culeyska boggaaga, ha ka fogaan Kraken, mid ka mid ah adeegyada ugu fiican shabakadda! Waxaan isku daynay adeegyo bilaash ah waqtiyadii lasoo dhaafay - laakiin sawiradeena waaweyn ayaa badanaa aad u weynaa cabirka feyl ahaan ee loogu talagalay adeeggooda - noocee ah guuldarooyinka ujeedada!
Kraken wuxuu leeyahay isugeyn websaydh buuxa ah, API adag, iyo - mahadsanid - WordPress Plugin! Fidinta waxay kuu ogolaaneysaa inaad si otomaatig ah u hagaajiso markaad soo dejiso iyo sidoo kale jumlada waxay hagaajineysaa sawirro kale oo aad horay u soo dejisay. Natiijooyinka waa kuwo aad u yaab badan:
Iyo, haddii aad tahay hay'ad, adeegga Kraken wuxuu bixiyaa furayaal badan oo API ah si aad ugu xirto tiro macaamiisha ah adeegga
Saxiix u Gaaray Kraken
Kaliya qoraal, waxaan isticmaaleynaa kuweenna Xiriirinta xiriiriye Kraken qoraalkan! Waxaan rajeynayaa inaad kubiirto oo aad miro dhalin doonto faa'iidooyinka.
Tags: alt tagsqoraalka altcdnxawaaraha goobta googlefaafidda sawirkamagaca faylka sawirkaqaabaynta sawiradahagaha hagaajinta sawirkasawir ku habboonaynta faahfaahintasawir cabbirsawirka boggacinwaanada sawirkasawirokrakentayadoo sawiradaxawaaraha boggasawirro jawaab lehSEOhagaajinta sawirkagaagaabanxawaaraha goobtasrcsetyar yarhagaha hagaajinta boggadegel-dhismexpertsawir wordpress cadaadin ahcabbirka sawirka wordpresswordpress kraken pluginwp burburi